भारतले बनायो नेपालीका भाञ्जालाई विदेश सचिव::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
भारतले बनायो नेपालीका भाञ्जालाई विदेश सचिव
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : शनिबार, पुस १२, २०७६
काठमाडौं–भारतले अमेरिकाका लागि राजदूत रहेका हर्षवर्द्वन शृंगलालाई नयाँ विदेश सचिवमा नियुक्त गरेको छ । भारतका विदेश सचिव विजय गोखलेको पदावधी सकिन केहीदिन बाँकी रहेका बेला शृंगलालाई विदेश सचिव नियुक्त गरिएको हो ।
गोखलेको पदावधि सकिनासाथ शृंगलाले कार्यभार सम्हाल्नेछन् । भारतीय विदेश सचिव पदीय हिसावले पनि छिमेकी मुलुकका लागि महत्वपूर्ण पद हो । नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी, भियतनामी, फ्रेन्च भाषासमेत राम्रोसँग बोल्ने भारतीय विदेश सचिव शृंगला भने नेपालीका भाञ्जा हुन् ।
ललितपुर मामाघर भएका शृंगला सन् १९८४ व्याचका कर्मचारी हुन् । उनका पिता छिरिङ्ग शृंगला दार्जीलिङ्गमा पढ्दै गर्दा त्यहाँ पढ्न गएकी ललितपुरकी नेपाली छात्रा हरिदेवी बस्नेतसँग प्रेम सम्बन्ध गाँसिएको थियो ।
उनले त्यसपछि हरिदेवीसँग नै विवाह गरेका थिए । सचिव शृंगला परिवारको जेठो छोरो हुन् । उनको जन्म मुम्बइमा भएको थियो भने मायो कलेजमा उनले अध्ययन गरेका थिए ।
उनका मावली परिवार ललितपुर स्थायी बासिन्दा हुन् । शृंगलाले सन् २०२० को जनवरी २९ बाट भारतको ३३ औं विदेश सचिवका रुपमा काम सुरु गर्दैछन् । अहिले उनी अमेरिकाका लागि भारतका राजदूत छन् । उनले यसअघि बंगलादेशका लागि भारतको उच्चायुक्त र थाइल्यान्डको लागि भारतको राजदूतका रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।
उनले बंगलादेशसँगको सीमा समस्या समाधानमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उनी अंग्रेजी र हिन्दीका अतिरिक्त भियतनामी, फ्रेन्च र नेपाली भाषापनि बोल्ने इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ । उनी भारतीय विदेश मन्त्रालयमा बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका र माल्दिभ्स मामिलाका प्रमुखका रुपमा पनि काम गरिसकेका छन् ।
यूरोपमा किन रिजक्ट हुँदैछन् चिनियाँ स्वास्थ्य सामाग्री?
कोरोनाले मर्नेको संख्या दिनदिनै बढ्दै, एकैदिन २ हजार १४६ जनाको मृत्यु
डोनाल्ड ट्रम्प ‘यूटर्न’ : कोरोना महामारीबाट छुटकारा पाउन देशभर १ महिने कडा नियम
कोरोना महामारी : एकैदिन एकैदेशमा ८३८ जनाको मृत्यु, १८ हजार नयाँ संक्रमित